Ziyintoni iRubyysh Tribe yeMecca?
AmaKurayshhi anamandla aseArabia
AmaKuraysh yayingumndilili onamandla onoMninimzi wase-Arabia ngekhulu lesixhenxe. Yayilawula uMecca , apho yayingumgcini we- Kaaba , indawo engcwele yePagan kunye neendawo eziya kubahambi bee-pilgrims ezaba ngcwele kwi-shrine. Isizwe samaKuraysh ubizwa ngokuba ngumntu ogama linguFihr - enye yezona zibalulekileyo kunye nezidumi zaseArabia. Igama elithi "amaKuraysh" lithetha "oqokelela" okanye "ophanda." Igama elithi "amaKuraysh" linokuphinda linyathelwe iQuraish, iCrara okanye iKoreish, phakathi kwezinye izinto ezininzi zokupasa.
Umprofeti uMuhammad namaKuraysh
Umprofeti uMuhammad wazalwa emkhosini wakwaBanu Hashim wesizwe samaKuraysh, kodwa waxoshwa kuwo emva kokuqala ukushumayela amaSilamsi kunye nokuzimela kwamanye amazwe. Kwiminyaka eyi-10 eyalandelayo emva kokuxoshwa kukaMprofeti uMahammad, amadoda akhe namaKurayashi alwa nemfazwe emithathu emithathu - emva koko umprofeti uMuhammad wabamba ulawulo lwe-Kaaba kwisizwe samaKuraysh.
Amaqhosha amane okuqala amaSulumane ayevela kwisizwe samaKuraysh. AmaKurayshhi yedwa isizwe ekuye kuyo yonke "i-surah," okanye isahluko - kunye neyesifutshane nje ngeendinyana ezimbini - inikezelwa kwiQuran:
"Ukukhuselwa kwamaKushi: ukukhusela kwabo ehlobo nasebusika." Ngoko ke makabakhonze iNkosi yale Ndlu, eyabondla ngemihla yendlala, yabakhusela kuzo zonke iingozi. " (Surah 106: 1-2)
Igazi lamagatsha amaninzi wesizwe samaKuraysh (kwakukho iintsapho ezili-10 ngaphakathi kwesizwe) zisasazeka kude kwiArabia - kwaye isizwe samaKurayashi sisona sikhulu kunazo zonke eMecca.
Ngako oko, abaphumelele basaphila namhlanje.
U-Albert Einstein kwiSayensi, uThixo, kunye neNkolo
Ukuqiniswa okungafaniyo kokungahambelani okanye okunye okuthintekayo